भोलीदेखि शेयर बजार अनलाइन प्रणालीमा
आज : २०७६ बैशाख १२, बिहीबार / Thursday, Apr 25, 2019
काठमाडौं, १९ कात्तिक । भोलीदेखि शेयर कारोवार अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ ।
धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । स्टकका प्रवक्ता मुरहरि पराजुलीले अनलाइन कारोवार प्रणालीको सुरुआत गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
शेयर कारोवार गर्न चाहने लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीकहाँ गएर कारोवार सम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण खुल्ने खाता खोलेपछि घर, कार्यालय वा जुनसुकै स्थानबाट पनि सहजै कारोवार गर्न सक्नेछन् ।
स्टकले गत साउन १ गतेदेखि परिक्षण गरिरहेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी सबै जोडिएका छन् । उनीहरुले आवश्यक भौतिक तयारीसमेत सबै गरिसकेका छन् । स्टकका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार शेयर कारोवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्यसाथ नयाँ प्रविधि जडान गरिएको हो ।
यसअघि शेयर कारोवार गर्न चाहनेले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यालय अनिवार्य रुपमा नै जानुपर्ने वाध्यता रहेको थियो । नयाँ प्रणालीको जडानसँगै कारोवार गर्दै आएकाले दलाल मार्फत ‘युजरनेम र ‘पासवर्ड’ प्राप्त गर्ने छन् । त्यसका लागि व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
व्यक्तिगत विवरणका लागि इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै शेयर बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच क्रमिक रुपमा बढ्दै जाने र सो प्रणाली नेपालको पूँजी बजारको कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास स्टकले लिएको छ । रासस
२०७५ कार्तिक १९ सोमबार १४:४८:०० मा प्रकाशित
मदिराले धानेको राजश्व
चितवन, ११ वैशाख। आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा सङ्कलन हुने राजश्वको अधिकांश हिस्सा मदिराले धान्ने गरेको छ । चितवन र नवलपुर जिल्ला हेर्ने यस
शिवम् सिमेन्ट्सको शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांस
काठमाडौं, १० वैशाख । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको तेश्रो वार्षिक साधारण सभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसकेपछि शिवम् सिमेन्टले
काठमाडौँमा पाँच हजार साना उद्योग दर्ता
काठमाडौँ, १० वैशाख । देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको साना तथा घरेलु उद्योग दर्ताको क्रम बढ्दो छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी
लाभ कर नतिर्ने एनसेलको सीम प्रयोग नगर्न अपील
काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभ कर नतिर्ने एनसेलको सीम प्रयोग नगर्न अभियन्ताहरुले आव्हन गरेका छन् । उनीहरुले एनसेललाई कुनै पनि किसिमको
करीनाले छोरा बिगारेको सैफको आरोप ?
विश्वकपको लामो यात्रा, नेपालको सम्भावना कति ?
शुक्रबारदेखि पर्यटन ‘मार्ट’
श्रीदेवीकी कान्छी छोरीको हिरो पिता बोनी कपूरले छान्ने
मलेसियालाई हरायो नेपालले, अर्को खेल बिहिबार
दुई वर्षपछि ‘गुत्थी’ कपिल शर्मा शो मा
श्रीलंका विस्फोटमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीको ८ वर्षिय नातेदारको मृत्यु
डडेल्धुरामा बस दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
बसको ठक्करले मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
भूगर्भविद्को भविष्यवाणी- 'नेपालमा ८.५ को भूकम्प हुनसक्छ'
वैज्ञानिक भन्छन् : नेपालमा फेरी आठ रेक्टरको भूकम्पको खतरा
विश्का चर्चित धनाढ्य बिल गेट्स किन जेल परे
चर्चित बलिउड हस्ती अहिले यस्ता काममा व्यस्त
प्रधान न्यायाधीशको आदेशले २ अर्ब मूल्यको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा
‘मेस्सीले आगामी बेलोन डी ओर पाउनुपर्छ’ – रिभाल्डो
पर्दा उघारेर हिँडेका माधव नेपाल कता हराए ?
प्रचण्ड किन सुटुक्क गैरहन्छन् सुकुटे ?
नक्कली ज्वाइँले अमेरिका लैजाने भन्दै ४२ लाख ठगे
शाकाहारी बनेर सफल भए यि क्रिकेटर